🥇 ▷ Gang Nations, waa ciyaar istiraatiijiyad cajiib ah oo loogu talagalay iPhone iyo iPad ✅
Gang Nations, waa ciyaar istiraatiijiyad cajiib ah oo loogu talagalay iPhone iyo iPad
Muuji awoodaada aad ula dagaallami karto oo aad u difaaci karto Gang Nations ee loogu talagalay iPhone, iPad iyo iPod taabashada
Waxaa laga heli karaa App Store, dukaanka app ee Apple, the ciyaarta istiraatiijiyadeed ee cusub ee cajiibka ah ee loogu talagalay iPhone iyo iPad, Gang Nations. Ciyaartan, oo bilaash lagu heli karo, ayaa lagu qalabeeyay muuqaalo cajiib ah oo aad u yeelan doonto mas’uul ka noqoshada inaad ku guuleysato dhulalka kala duwan si aad u noqoto madaxa xaafada. Baro dhammaan astaamaha ciyaartaan oo kala soo bixi hoos.
Muxuu yahay ‘Gang Nations’ iPhone iyo iPad?
The Ciyaarta Gang Nations ee loogu talagalay iPhone, iPad iyo iPod taabashada, ayaa laga heli karaa App Store, waana isugeyn la yaab leh oo ah istaraatiijiyadda difaaca iyo istiraatiijiyada dagaalka ee jawiga magaalada gaarka ah Soo qortaan tuugada, tuugada, kuwa wax xukumay iyo kuwa kale oo badan si ay ugu faafiyaan khilaafaadka udhaxeeya xuduudaha iyo dhisida boqortooyadaada dambiyada. Gang Nations waa isku dhaf cajiib ah oo ah xilal xiiso leh oo loogu talagalay ciyaartoy iyo dagaalo aad u fara badan, iskuna dayaya dhismaha magaalooyinkii dagaalkii ugu adkaa. Noqo madaxa xaafada!
Maskaxda ku hay in si aad ugu ciyaartid ciyaartaan si wanaagsan waa inaad ku dhejisaan iPhone-kaaga ama iPad-ka macruufka 6.0 ama noocyada sare ee nidaamka qalliinka mobilada ee Apple. Qalabka la jaan qaada Gang Nations waa iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 lagu daray, iPad 2, iPad 3, iPad 4, iPad Mini iyo jiilka 5-aad iPod Touch.
Astaamaha ciyaarta ‘Gang Nations’ ee aaladaha ‘iOS’
Ciyaartan loogu talagalay iPhone iyo iPad waxaa lagu gartaa inay leeyihiin howlaha soo socda iyo astaamaha:
Dhis xaafad cajiib ah oo u roon qalcad ka dhanka ah weerarada cadawga.
Qaado ciyaartoy kale oo khadka tooska ah ka ciyaara si aad u kordhiso sumcaddaada.
Ku samee koox aad iska leedahay ciyaartoy iyo saaxiibo kale khadka tooska ah.
10 ciidamo gaar ah oo leh dhowr horumarin iyo xirfado ay ku xakameeyaan.
Jidkaaga u mari olole dambiyeedyo xiiso leh oo ka dhaca adduunkaan hoose.
Soo gal Facebook oo keydi horumarka aad ka sameysay magaalada.
La yaab leh sawiro xalin sare.
Dagaallada u dhexeeya guutooyinka: dhakhso u imanaya.
Waa muhiim in maskaxda lagu hayo in ciyaarta ‘Gang Nations’ ee aaladaha macruufka, inkasta oo ay tahay ciyaar gebi ahaanba bilaash ah, haddana waxa jira waxyaabo qaarkood, sida dahabka, oo ay suurtagal tahay in lagu iibsado lacag dhab ah. Haddii aadan dooneynin inaad isticmaasho shaqadan, waad ka hortagi kartaa barnaamijyada wax gadashada, adigoo adeegsanaya nidaamka aaladda.
U soo dejiso Gang Nations for iPhone iyo iPad
Hadaadan wali haysan istaraatiijiyadda iyo ciyaarta ficil ee aaladda iOS (iPhone, iPad), waxaad kala soo bixi kartaa khadka tooska ah ee tooska ah, kana soo degso App Store, oo aad ka heli doonto hoosta.
Wadamada gaangiska wuxuu ku jiraa App Store, wuxuu ubaahanyahay macruufka 6.0 ama wixii ka dambeeya. La jaan qaada iPhone, iPad iyo iPod taabashada. Barnaamijkan waxaa loo habeeyay iPhone 5. Waxaa lagu heli karaa luqadaha soo socda: Isbaanish, Jarmal, Shiinees fudud, Shiinaha, Dhaqanka Shiinaha, Koorland, Boortaqiiska, Ruushka, Turkiga.